Wafumanisa loo nto uLisette, oneminyaka eli-16, nowayekhe wanomdla kwenye intombazana. Uthi: “Kwibhayoloji endandiyifunda esikolweni, ndafumanisa ukuba xa umntu efikisa, ii-hormones zenza nantoni na eziyithandayo. Ndiqinisekile ukuba, ukuba abantwana abaninzi abafikisayo bebeyazi into eqhubeka emizimbeni yabo, bebeza kuqonda ukuba, ukuba nomdla kumntu ofana nawe kunokuba yinto nje edlulayo, nto leyo enokubenza bangazixeleli ukuba bazii-gay.”
Ukuba impendulo yakho nguewe kulo mbuzo wokugqibela, yazi ukuba ucinga ngendlela engachananga yokuba abantu bafanele bayekwe balale naloo mntu bafuna ukulala naye. IBhayibhile iqinisekisa abantu ukuba bayakwazi ukungavumeli umnqweno wokulala nabanye abantu abafana nabo.—Kolose 3:5.
IBhayibhile ayithethi into engenakwenzeka. Nto nje iyalela amakhwenkwe anomdla wokulalana okanye amantombazana anomdla wokulalana ukuba enze kanye le nto ifunekayo kwinkwenkwe efuna ukulala nentombazana engatshatanga nayo—‘ukusaba kuhenyuzo.’ (1 Korinte 6:18) Eyona nyaniso yile, izigidi zamadoda afuna ukulala namabhinqa angangatshatanga nawo nezifuna ukulandela imigaqo yeBhayibhile ziyazibamba nokuba sele zijongene nasiphi na isilingo. Nabo ke bathanda abantu abafana nabo banokukwenza oko ukuba bafuna ukuthandwa nguThixo.—Duteronomi 30:19.